HYBURFESTIVAL Hubka Nukliyeerka ee Bilaashka ah - Dunida Maarso
Bogga ugu weyn » Noticias » Isgaarsiinta Rasmiga ah » MAGAALADA LAGA HAYO Hubka nukliyeerka
Dabaaldegga Dhaqanka Adduunka ee HUBKA BADAN Hubka Nukliyeerka ah 190 dhacdo ayaa la soo ururiyey
Muwaadiniinta adduunka waxay xaq u leeyihiin inay u dabaaldegaan gelitaanka dhaqan gelinta heshiiska Mamnuuca hubka Nuclearka (TPAN) taas oo ka dhici doonta Qaramada Midoobay 22/1/2021. Waxaa lagu gaarey mahadnaqa saxiixyada 86 dal iyo ansaxinta 51, taas oo aan ugu mahadnaqeyno geesinimadooda ku aaddan qaadashada awoodaha nukliyeerka weyn. Gudaha ICAN, olole kor u qaaday oo sababtaas awgeed ayaa lagu helay abaalmarinta Nobel Peace Prize ee 2017. Maalmahan, in ka badan 160 munaasabadood ayaa lagu qabtaa waddamada qaaradaha oo dhan si ay u taageeraan.
Tani CyberFestival waa mid ka mid ah. Waxay ku talajirtaa inay wax ku darsato waxtarkeeda geeddi-socod sii ballaarin doona illaa hubka nukliyeerka gebi ahaanba laga tirtiro meeraha isla markaana loo rogo bogga boggan mugdiga ah ee ilbaxnimada aadanaha.
10 saacadood oo aan kala go 'lahayn, barnaamij fiidiyowyo ah ayaa lagu sii dayn doonaa iyada oo loo marayo Zoom iyo kanaalada Facebook kuwaas oo dib u eegis ku sameeya riwaayadaha taariikhiga ah iyo xafladaha nabadda iyo ka soo horjeedka hubka nukliyeerka oo leh heeso, sumcad, ficillo iyo taageero shakhsiyadeed oo ka socda adduunka dhaqanka, isboortiga iyo siyaasadda jawiga, markhaatiyada tixraacyada taariikhiga ah iyo kuwa hada jira, bayaanka abaalmarinta Nabada ee Nobel, taageerada xildhibaanada iyo dowladaha hoose, taageerada ururada, xitaa ficilada saldhiga bulshada ee dhaqdhaqaaqayaasha, muwaadiniinta caadiga ah, dhalinyarada iyo caruurta iskuulka oo socodkooda, bandhigyadooda, dadaalkooda uruurinta, iskuulada, jaamacadaha iyo astaamaha Nabadda ayaa difaaca wax kasta oo xiriir la leh adduun aan dagaallo ka jirin iyo, dabcan, ka madax bannaan hubka nukliyeerka.
Arrintan Dhaqanka Dunida CyberFestival BILAASHKA Hubka Nukliyeerka ah ¡Tallaabo weyn oo loo qaaday aadanaha! 190 munaasabadood ayaa la ururiyaa kuwaas oo boqolaal ururro iyo boqolaal kun oo dad ah oo ka kala socda qaaradaha oo dhan ay ka qaybgalaan.
Maalin: Janaayo 23 ee 2021
Jadwalka: Barnaamijka 'Cyberfestival' wuxuu bilaabmi doonaa 10:30 GMT-0 wuxuuna dhammaan doonaa 20:30 GTM-0.
Baloogyada ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya, oo soconaya hal saac, midkiiba, ayaa u heellan in laga sii daayo soo-koobidda dhacdooyinka ugu muhiimsan ee hay'adeed ee dhacay markii la dhaqan-geliyey TPAN ee xarunta Qaramada Midoobay.
8da saacadood ee dhexe waxay u dhigantaa 8 qaybood, oo mid walboo ka mid ahi ku bilaaban doonto hordhac ku saabsan waxyaabaha ay ka kooban tahay. Waxyaabaha ku jira ayaa qiyaastii la waafajiyay aag kasta oo juqraafi ah: Oceania-Asia iyo Europe-Africa-America.
Qaarkood waa dhacdooyin taariikhi ah oo la xiriira aqoonsiga ficillada iyo tabarucaadka calaamadeeyay xilli.
Kuwa kale, kuwa ugu badan, waa ficillo iyo tabarucyo la sameeyay sannadihii la soo dhaafay iyada oo lagu taageerayo nabadda iyo, gaar ahaan, tirtiridda hubka nukliyeerka.
Waxaa jira barnaamij faahfaahsan oo leh dhammaan waxyaabaha ku jira, jadwalka iyo kaqeybgalayaasha.
Waxyaabaha kale: Marka lagu daro waxyaabaha ku xusan, qaar ka mid ah dukumiinti iyo macluumaad ku saabsan 157 dhacdo Maalmahan waxaa ka fuliya qaaradaha oo dhan ururada ICAN.
Waa muhiim in aragtida marxaladdan cusub ee taariikhiga ah. Sida aan wada xaqiijin karno, ansaxinta TPAN, oo ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan adduunka, kuma jirto bogagga hore ee wargeysyada waaweyn ama ma fureyso wararka shabakadaha waaweyn ee TV-ga. Waa xaalada dalal badan oo ay dowladiisu taageereen oo ay / ansaxiyeen TPAN muwaadiniintooda aysan ogeyn. Waxaa jira qarsoodi dhab ah oo qarsoodi ah oo arrintan ku saabsan oo ay warbaahintu leedahay. Taasi waa sababta ay nooga go'an tahay inaan ka dhigno xaqiiqadan muhiimka ah heer caan ah qaab soo jiidasho leh, iyadoo la siinayo baahinta ugu badan iyo taageerida himilooyinka dadweynaha da'da yar ee sida cad uga soo horjeeda hubkan.
FOOMKA IYO DIIWAANGELINTA
Marka la eego muddada dheer, waxa ugu dambeeya ayaa la duubi doonaa si looga dhigo mid muuqan kara waqtiyada kale iyada oo loo eegayo mid walba danaha ay leedahay.
URURKA: In kasta oo dadaalka ay dhiirrigelisay MSGySV, barnaamijkan 'CyberFestival' waa natiijada ka dhalatay wada shaqeynta dad badan iyo kooxo waxayna daboolaysaa kala duwanaansho ballaaran oo xiriir iyo dalal ah.
Hadafku waa in lagu celiyo tan CyberFestival markii koox cusub oo dalal ah ay ku biiraan TPAN, si firfircoon koritaanka illaa laga gaarayo ciribtirka ugu dambeeya.
ISGAARSIINTA ADUUNKA Dagaal la’aan iyo Rabshad la’aan soo galitaanka xoog ee TPAN
SHIRKA SAXAAFADA COSTA RICA: